8 Xaqiiqo Oo Macquul Ah Inaadan Ka Ogeyn Nolosha Lionel Messi – Garsoore Sports
8 Xaqiiqo Oo…
Lionel Messi waa mid ka mid ah magacyada ugu caansan adduunka, waxaa dad badani ay u tixgeliyaan inuu yahay cayaaryahankii ugu fiicnaa taariikhda kubbada cagta, waxaana uu xiddigan haatan waqti quruxbadan xulkiisa Arjentina kula qaadanayaa tartanka Kooba Ameerika isagoo ah wakiil xor ah maadaama uu idlaaday heshiiskii uu kula jiray kooxdiisa Barcelona.
Intaa marka laga soo tago, waxaa macquul ah in taageerayaasha kubbadda cagta aysan badankood wax ka aqoon nolosha cayaaryahankan.
Haddaba aqriste waxaan qormadan kuugu soo gudbineynaa 8 xaqiiqo oo shaqsiyadda iyo xirfadda cayaareed ee mucjisadda kubbada-cagta ku saabsan.
#1 Barcelona ayaa ka caawisay la dagaalanka cudurkii uu la dhibooday yaraantiisii
Markii uu cunugga ahaa, Messi waxaa ku dhacay cudurka sababa hormoon yaraanta koritaanka. Qeyb kamid daaweynta cuddurka, Messi ayaa muddo saddex sanno ah lugaha isaga durayay daawada koritaanka aadanaha. waxaa daweyntiisa ku baxday 1,500 oo doolar bishii, oo ay bixinaysay kooxda Barcelona.
#2 Wuxuu ku sigtay inuu u safto Xulka Isbaanishka
Marka lagasoo tago funaanadda Barcelona, Messi waa midka ugu caansan haatan ee xirta maaliyadda buluugga khafiifka iyo caddaanka ah ee xulka Arjentiina. Si kastaba ha noqotee, kahor intaan la xaqiijin inuu yahay xiddig reer Argentine ah, wuxuu qarka u fuulay inuu u cayaaro xulka Isbaanishka.
Maadaama uu weeraryahanka leeyahay awooweyaal kasoo jeeda gobolka Catalonia ee dalka Isbaanishka.
#3 Wuxuu Leeyahay Dhaqamo Kala Duwan
Messi wuxuu dhaxal u leeyahay dhaqamo kala duwan. Qoyska aabihiis waxay ka haajireen Talyaaniga halka hooyadiis ay ka timid Lubnaan. Eheladiisa kale waxay ka yimaadeen Ingiriiska sidoo kale.
#4 Debaaldega Uu Ku Maamuuso Ayeeyadiis
Messi wuxuu si joogta ah u sheegaa ayeeyadiis inay tahay mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee noloshiisa maadaama ay si joogto ah ula socon jirtay kulamadii iyo tababaradii xilligiisii caruurnimo. Nasiib darrose, waxay dhimatay isagoo toban sanno jir ah, laakiin weeraryahanka Barcelona ayaan ayeeydiis hilmaamin isaga oo mar kasta oo uu gool dhaliyo gacmaha ku tilmaama dhinaca cirka si uu u muujiyo jacaylka uu u qabo.
“Debaaldegan waxaan u sameynayaa inaan u goolasheeyda u hibbeeyo ayeeyday, sababtoo ah waxay ii kaxayn jirtay kubbada-cagta laakiin hadda ma arki karto ilaa iyo intaan soo gaaray,” Messi ayaa sidaa yidhi sannadkii 2010kii.
#5 Tattoo-ga Ayuu Aad U Jecelyahay
Messi wuxuu jecel yahay tattoo-ga. Wejiga hooyadiis ayuu ku sawirtay garabkiisa middig. Wuxuu ku sawirtay magaca wiilkiisa kubka biddix. Tani waxay muujineysaa inuu aad ugu dhow yahay qoyskiisa iyo eheladiisa.
#6 Wixii Uu Sameeyay Sannadkii 2011-2012
Ciyaaryahanka Barcelona ayaa dhaliyay 91 gool hal sano gudaheed xilli-cayaareedkii 2011-2012.
Sannadkii 2012, Messi wuxuu dhaliyay 79 gool oo Barcelona ah iyo 12 uu u dhaliyay Argentina.
Wuxuu dhigay rikoor caalami ah, isagoo garaacay rikoorkii halyeeygii Jarmalka Gerd Muller oo dhaliyay 85-gool sannadkii 1972.
#7 Messi Kama Jawaabo Wicitaanadda Aan Deg-dega Ahayn
Messi ma jeclo ku hadalka taleefanka haddii aysan aheyn mid deg deg ah. Habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo waa SMS ama WhatsApp.
#8 Wuxuu Jecelyahay Playstation-ka
Messi waa taageere weyn oo PlayStation-ka cayaara wuxuuna jecel yahay inuu dul fadhiyo cayaar gacameedkan muddo saacado ah, haddii uusan ku ciyaareynin garoonka dhexdiisa ama uusan waqti la qaadaneyn qoyskiisa inkastoo mararka qaar uu caruurtiisa la cayaaro.
Toos: Czech Rep. Vs Denmark | 8 Dhammaadka Euro 2020
TOOS: England Vs Ukraine |8 Dhammaadka Euro 2020 | Daawo